Ixesha kunye nabahlobo 11
I-theosophist ijonga umntu kumanqaku amabini. Kubo umntu uyeke ukufa, komnye engafisi. Inxalenye efayo yomntu yenziwa yimigaqo emine eyahlukileyo. Okokuqala, umzimba wokomzimba, owakhiwe ukusuka kwisolids, ulwelo, umoya nomlilo, zizinto zonke zomzimba wenyama. Okwesibini, i-linga sharira, eyiyo ifom, okanye uyilo lomzimba olomzimba. Eli fomu lomzimba le-ether, yinto engatshintshi kakhulu kunokutshintsha komzimba okuhlala kutshintsha. Uyilo okanye uhlobo lomzimba ngumgaqo obumba ukutya okungaguqukiyo zesolids, ulwelo, igesi kunye nokukhanya kuthathwe emzimbeni, kwaye oku kugcina ubume bayo ubomi babo bonke. Okwesithathu, yiprana, okanye umgaqo wobomi. Lo mgaqo wobomi ubangela ukuba umzimba wefomu ukhule kwaye ukhule, kungenjalo ifom iya kuhlala ihlala injalo. Ngokomgaqo wobomi ukutya komzimba wenyama kugcinwa kukujikeleza rhoqo. Umgaqo wobomi uyakudiliza kwaye unciphise okudala kwaye ungene endaweni yefom kunye nomcimbi omtsha. Yiyo ke loo nto indala yomzimba iyasuswa kwaye ithathe indawo yomzimba omtsha, kwaye ubomi bomi buye bakhiwe kumzimba wenyama, kwaye loo mzimba wenyama unikiwe imilo kwaye ubumbene kunye uyilo okanye uhlobo lomzimba. Okwesine, ngu, umgaqo wokunqwenela. Umnqweno sisilwanyana esiphithiphayo esinqwenela umntu. Ngokwemvelo indalo kunye notyekelo lwesilwanyana emntwini, kwaye isebenzisa kwaye inika umkhombandlela kubomi kunye nesimo somzimba wenyama. Le migaqo mine yilaa nxalenye yomntu iswelekayo, eyahluliweyo, eyahlulweyo kwaye ibuyela kwizinto ezazitsalwe kuzo.
Inxalenye yokungafi komntu iphindwe kathathu: Okokuqala, manas, ingqondo. Ingqondo ngumbandela owahlukileyo owenza umntu abe ngumntu. Ingqondo sisiseko sokuqiqa emntwini, loo nto ihlaziya, yahlulahlula, ithelekise, izazise ukuba iyodwa na kwaye iyazibona ukuba yahlukile kwabanye. Idibanisa umnqweno kwaye ngexesha lobomi bomzimba ikhombisa umnqweno wokuba ngowakho. Izizathu zengqondo, kodwa umnqweno ufuna; Iminqweno inqwenela, ngokungafani nesizathu. Ukusuka kunxibelelwano lwengqondo ngomnqweno kuza onke amava ethu ebomini. Ngenxa yoqhakamshelwano lwengqondo kunye nomnqweno sinawo ububini bomntu. Kwelinye icala, umnqweno onqwenelekayo, onomsindo, nengxolo; kwelinye, isengqiqweni, uxolo luthando oluvela kwimvelaphi yakhe. Ingqondo ngumgaqo oguqula ubuso bendalo; Iintaba zikhe zahonjiswa, kwakhiwa imisele, kwakhiwa izakhiwo eziphakamileyo zesibhakabhaka kunye namandla endalo aqokelelene kwaye aqhutywa ukwakha impucuko. Eyesithandathu, i-buddhi, ngumphefumlo kaThixo, umgaqo owaziyo kwaye waziva ungowabanye nabanye uqobo. Ngumgaqo wobuzalwana bokwenene. Iyazincama ukuze yonke indalo inyuswe kwinqanaba eliphezulu. Yinqwelo esebenza umoya ococekileyo. Okwesixhenxe, i-atma, umoya ngokwawo, umsulungekile kwaye ungadyobhekanga. Zonke izinto ziyadibana kulo, kwaye ingumgaqo oxhaphakileyo ngaphakathi nangazo zonke izinto. Ingqondo, umphefumlo kunye nomoya, yimigaqo yokungafi, ngelixa eyokwenyama, imilo, ubomi kunye nomnqweno ziyafa.
Ukwahlulahlulwa kobukristu komntu emzimbeni, umphefumlo kunye nomoya akucacanga kwaphela. Ukuba umzimba ubhekiswa kwimo yomzimba, ke kwenzeka njani ukuba ubomi bohlukane, ifom esisigxina kunye nesilwanyana emntwini? Ukuba ngomphefumlo kuthetha into enokuphulukana okanye isindisiwe, oku kufuna inkcazo eyahlukileyo kwikrisimesi. Umkristu usebenzisa umphefumlo kunye nomoya kwaye ngokungafaniyo kwaye ubonakala engakwazi ukuchaza umphefumlo nomoya okanye ukungakwazi ukubonisa umohluko phakathi kwento nganye. I-theosophist ngokudweliswa kwayo okuphindwe kasixhenxe inika umntu ukucaciswa kwendoda, ubuncinci bayo bufanelekile.
Ukufa kuthetha ukwahlula-hlula komzimba kwimo yoyilo, okanye umzimba wendlela. Njengoko ukufa kusondela kwifomu yomzimba we-ether uzikhupha kwiinyawo ukuya phezulu. Ke ingqondo okanye i-ego iyawushiya umzimba uphume kunye nomoya. Umphefumlo xa usiya umisa ubomi, ushiya umzimba wefom, kwaye umzimba wefomu unyuka esifubeni kwaye udla ngokuphuma emzimbeni ngokwasemlonyeni. Intambo eyayixhume umzimba kunye nomzimba wayo iqwengwe, kwaye ukufa kuye kwenzeka. Ke akunakwenzeka ukuvuselela umzimba wenyama. Umgaqo womnqweno unokubamba ingqondo yenyama kubukhoboka kangangexesha elithile, ukuba le ngqondo ngexesha lobomi icinge ngeminqweno yayo njengayo, kwimeko leyo ihlala kunye neminqweno yesilwanyana kude kufike ixesha elinokuthi umahluko phakathi kwayo kunye nayo, ke idlula ikwimeko efanelekileyo yokuphumla okanye imisebenzi evisisana neyona ngcinga iphakamileyo, eyonwatyiswa yiyo ngelixa ihlala emzimbeni. Ilapho ihlala khona de kufike ixesha lokuphumla kwayo, emva koko ibuyele kubomi basemhlabeni ukuze iqhubeke nomsebenzi wayo ukusuka kwindawo apho yayishiywe khona.
Sithatha ingxelo ye-theosophist njengeyona ichanekileyo, kuba iqabane elinokuthi lithethe ngokuzimeleyo kuphela liyinto ecacileyo yento ebelicinga ngayo ngexesha lobomi kwaye loo ncoko iyasebenza nakwizinto ezibonakalayo, ngelixa indawo kaThixo umntu uzothetha ngezinto zokomoya.
Akunakwenzeka ukuba umphefumlo womntu uvele kwiindawo ezinabantu kwaye unxibelelane nabahlobo, kodwa yinto engenakwenzeka ukuba iyenzeka, kuba abahlali abahlali abazi indlela yokukhupha ibanjwa lethutyana kwaye ngenxa yokuba imbonakalo enjalo iya kufuneka ibizwe ngumntu owaziyo, okanye ngomnqweno onzulu walowo uphila kunye nomphefumlo onenyama. Ayilunganga into yokuba imbonakalo yimiphefumlo yabantu abaswelekileyo ngenxa yokuba umphefumlo womntu ongakwazi ukwahlula phakathi kwayo kunye neminqweno yawo ihlala udlula metamorphosis efana naleyo yebhabhathane ukuze ikwazi ukuyifumana imeko yayo. Ngeli xesha ikulo meko ayisebenzi njenge coceko. Lo mphefumlo womntu okwaziyo ukuzikhethela ukwahlula isilwanyana unokwala ukubangaba unento yokwenza nesilwanyana eso sibangela ukuba sibe nentuthumbo enjalo.
Isizathu sesigameko esingaqhelekanga kangako njengokubonakala komphefumlo womntu onesidumbu kwisoni kuya kuba kukunxibelelana nomntu othile ngezihloko ezithile, umzekelo, njengolwazi ngokubaluleka kokomoya okanye ixabiso lefilosofi kulowo uchaphazelekayo. Unxibelelwano lwamaqumrhu enza ubungqongo phantsi kwesihloko somntu osileyo, incoko kunye nokuphambuka kwezinto ezingabalulekanga ngomba othile ngomba othile ophakanyiswe yenye yeetafile. Ukuba abahlobo bethu abashiyekileyo babenetyala malunga nencoko yokuqhuba ngelixa nathi ebomini babo bomhlaba, siya kuthi, njengabahlobo, sikhalele bona, kodwa nangona kunjalo bekuya kunyanzeleka ukuba sibabeke kwindawo yokufihlakala ephambeneyo, kuba bekuya kuba njalo. baye babonakala kwaoko ukuba baphulukene nengqondo. Yile nto yenzekileyo kwizidalwa ezibonakala emehlweni. Ziyekile iingqondo zabo. Kodwa umnqweno esithetha ngawo uhlala uhleli, kwaye ungumnqweno ngokubonakaliswa nje kwengqondo enganxibanga kunye nayo ebonakala ekubonakaleni. Ezi zinto zibonakalayo zitsiba ukusuka kwesinye isihloko ukuya kwesinye ngaphandle kokubonakalisa kwesizathu okanye naluphi na ucoceko lwengqondo okanye intetho. Njengobuhlanya, babonakala benomdla kwinto ethile ngesiquphe, kodwa bathi bakuphulukana nomxholo, okanye uqhagamshelo lwabo, kwaye bagxume baye komnye. Xa umntu etyelele kwindawo efihlakeleyo, uya kudibana namanye amatyala angaqhelekanga. Abambalwa baya kuncokola ngokulula ngezihloko ezininzi ezinomdla, kodwa xa imicimbi ethile iziswa kwenyanga iba nobundlobongela. Ukuba incoko iyaqhubeka ixesha elide ngokwaneleyo ingcaciso abayekayo ukuba ngabantu iya kufunyanwa. Kunjalo ngee-spooks okanye iifom zeminqweno ezibonakala kumgangatho. Bacacisa oko kubekade kudlulile kunye neminqweno yempilo yomhlaba kwaye bethetha ngokwezo zinto zinqwenelekayo, kodwa bahlala bangena ekuncokoleni okungathandekiyo xa kusaziswa ezinye izinto ezingafanelekanga kumnqweno wabo othile. Banobuqili besilwanyana kwaye, njengesilwanyana, baya kudlala malunga nentsimi kwaye bawele kwaye baphinde baphinde balande umkhondo wabo ukuze bakhuphe lowo ubalandelayo ngemibuzo elandelelana. Ukuba ukuzingela kuyaqhubeka, umntu oshiyekileyo ubuyela kulowo ubuzayo kuba "ixesha lakhe liphelile kwaye kufuneka ahambe" okanye kungenjalo uya kuthi akasazi ukuba aphendule athini. Ukuba umphefumlo womntu ongahlambulukanga ubonakala uya kuba uthe ngqo kwaye uzimisele kwiziteyitimenti zakhe kwaye into awayeyithetha iya kuba yexabiso kuloo mntu kubhekiswa kuye. Uhlobo lonxibelelwano lwakhe luya kuba lolokuziphatha, lokuziphatha, okanye lokuxabiseka ngokomoya, belungayi kuba yimicimbi eqhelekileyo, njengoko kusoloko kunjalo kwimeko.
Ukuba i-spooks okanye iifom zeminqweno ziqhagamshelwe ngexesha lobomi bomhlaba ngamagama abathi ngawo, bayazi izihloko ezithile, njengakwimeko yendoda ehlambalazayo, kodwa zizi-automatons kuphela, ziphindaphinda kaninzi kokukhululwa. iingcinga kunye neminqweno yobomi. Njengegramafoni bathetha phandle oko kwakuthethwa kubo, kodwa ngokungafaniyo negramafoni baneminqweno yesilwanyana. Njengoko iminqweno yabo inxulumene nomhlaba, injalo ngoku, kodwa ngaphandle kolawulo ngenxa yobukho bengqondo. Iimpendulo zabo ziphakanyisiwe kwaye zihlala ziboniswa yimibuzo ebuzwe kubo, kwaye ezi zinto zibonwa kwingqondo yombuzo nangona esenokungazi. Umzekelo, omnye unokubona ukukhanya kuboniswa kwisigcina-ntloko salowo unxibe iimpahla okanye enye into angayazi. Xa umntu obuzayo esazisiwe ngento angakhange ayazi, uyibona imnandi kwaye ngokuqinisekileyo ucinga ukuba ibinokwaziwa kuphela yena kunye nomncedisi wakhe, ngelixa kuphela ubonakaliso obonakalayo kwingqondo yalowo ubuzayo okanye ngenye into luphawu lwesenzeko esibangelwe luhlobo lomnqweno kunye nenkcazo enikeziweyo ngalo lonke ixesha itheko lakuvumela oko.
Akakho umntu othetha izinto ezifihlakeleyo okanye omnye umntu ohlonela iinyani ozama ukuziphika izibakala, okanye ayifihle inyaniso, engazami nokuzifihla, okanye azicacisa. Umzamo wakhe nawuphi na umntu othanda inyani kukufumana iinyani, ungazifihli; kodwa ukuthanda kwakhe iinyani akunyanzelekanga ukuba amkele njengokwenyani amabango omntu ongenangqondo, okanye lawo a-spook, okanye iqokobhe, okanye isiseko, azijongela phantsi njengesihlobo esimthandayo. Uyamamela amabango awenziweyo, aze ke angqine amabango ukuba ayinyani okanye abubuxoki ngobungqina obuphambili. Iinyani zihlala zizingqina. Ngaphandle kwemilomo yabo, abangcwele bazingqina bengcwele, izithandi-zobulumko ukuba babe zizithandi zobulumko; intetho yabantu abangenangqondo ibangqina ukuba ayinangqondo kwaye ii-spooks zizibonakalisa ziyi-spooks. Asikholelwa ukuba ii-theosophists zichasene nenyani ye -imoya, nangona bezikhaba ibango uninzi lwabezomoya.
Inxalenye yokuqala yombuzo yile: ngaba "imimoya" ngamanye amaxesha iyathetha inyani. Benza njalo ngamanye amaxesha; kodwa kunjalo nesona saphuli-mthetho senziwe nzima ngenxa yomcimbi. Ngaphandle nje kokuba imeko ethile yenyani ethiwe “ngomoya” inikiwe, siya kuhamba sitsho ukuba inyaniso okanye iinyani ezichazwe koko abanye abantu baya kubanyanzela ekubizeni u "moya" yinto eqhelekileyo. Oku, umzekelo, njengengxelo yokuba ngeveki uza kufumana ileta evela kuMariya, okanye kuYohane, okanye ukuba uMaria uza kugula, okanye uphilile, okanye ukuba lithamsanqa elihle liza kwehla, okanye ukuba umhlobo uza kufa, okanye ukuba kwenzeke ingozi Ukuba naziphi na kwezi zinto ziyinyani kuya kuhamba kuphela ukubonisa ukuba iziko-nokuba lelona liphezulu okanye liphantsi- linokuqonda okuhle kodwa kunokuba linjalo, ukuba alifundanga. Oku kunjalo kuba umzimba ngamnye ubona kwiplagi esebenza kuyo. Ngexesha lokuphila emzimbeni wenyama, umntu ubona izinto ezibonakalayo ngokusebenzisa amandla omzimba; kwaye iziganeko zibonwa kuphela ngexesha lokuvela kwazo, njengokufumana ukubanda, okanye ukuwa, okanye ukufumana incwadi, okanye intlanganiso ngengozi. Kodwa ukuba omnye akaphelelanga kumzimba wenyama kwaye usenazo iimvakalelo, ezi zinzwa zisebenza kwiplati ecaleni komzimba, eyi-astral. Umntu osebenza kwindiza ye-astral unokubona iziganeko ezenzeka apho; umbono kwindiza ye-astral uvela kumhlaba ophezulu kunowomzimba. Ke, umzekelo, ingcinga okanye injongo yomntu yokubhala ileta inokubonwa ngulowo ukwaziyo ukubona ezo njongo okanye ingcinga, okanye ukubanda kunokuxelwa kwangaphambili ngokuqiniseka ngokubona imeko yomzimba we-astral yalowo yiba nayo. Ezinye iingozi zinokuxelwa kwangaphambili xa izizathu zabo zibekiwe. Ezi zinto zibangelwa yinto engapheliyo kwiingcinga okanye kwizenzo zabantu, kwaye xa unikwe isizathu kulandela. Umzekelo: ukuba ilitye laphoswa emoyeni umntu unokuxela ukuwa kwalo kwakude kudala ngaphambi kokuba lifike emhlabeni. Ngokwamandla aphoswe ngawo kunye nomphakamo wokunyuka kwawo, ujikeleze imvelaphi yawo kunye nomgama oya kuwela kuwo unokuxelwa ngokuchanekileyo.
Amaqonga asebenza kwindiza ye-astral anokuzibona izezizathu emva kokuba zivelisiwe kwaye anokuqikelela isiganeko ngokuchanekileyo kuba ayabona kwi-astral ukuba iya kwenzeka ngokwasemzimbeni. Kodwa umbulali uyakubona ukunyuka kwelitye aze axele kwangaphambili imvelaphi yakhe inyani njengoyingcwele okanye isithandi sobulumko. Ezi zizinto ezibonakalayo. Ingcebiso enikelweyo malunga nendlela yokuphepha ingozi ayibonisi ukuba inikwa umphefumlo ongafiyo. Umntu onobuhlali unokucebisa enye ngengozi engenayo ngokuchanekileyo nangokucacileyo. Ubunokucebisa umntu emi ngendlela yelitye elihlayo aze anqande ukulimala kwakhe. Ngamana inyanga. Kungabuzwa ukuba le ngcebiso inokunikwa njani yi-spook, ukuba i-spook ayinangqondo. Singathi i-spook ayinangqondo ngengqondo efanayo yokuba umntu ongenathemba ongenantlonelo akanangqondo. Nokuba uphulukana nolwazi lwesazisi sakhe, kukho ukubonakalisa okumbalwa okufakwe kumnqweno, kwaye kuhlala kunjalo nangomnqweno. Ngulo mfanekiso unikezela ukufana kwengqondo kwiimeko ezithile, kodwa kufuneka ukhunjulwe ukuba nangona iqokobhe liphulukene nengqondo yokuba isilwanyana sihlala. Isilwanyana asilahlekanga ubuqili baso kunye nobuqili besi silwanyana ngengcinga eshiywe yingqondo siyenza ukuba ikwazi ukulandela, phantsi kweemeko ezithile, njengaleyo sele isetyenziselwe ukuqhubela phambili, iziganeko ezidlulayo kwindawo yendawo esebenza kuyo. Izibakala ke zibonakaliswa ngokwazo njengoko umfanekiso unokubonakaliswa sisipili. Xa umcimbi uboniswa kumzimba onqwenelayo kwaye lo mfanekiso uqhagamshelwe kunye okanye unxulumene nesinye sezitulo kwindawo ekubonwa kuyo, isiporho okanye iqokobhe liphendula kumfanekiso wengcinga oboniswe kulo kunye nokuzama ukukhupha ingcinga okanye umbono njengepiyano Unokuthetha okanye uphendule kumntu osebenzisa amaqhosha akhe. Xa umntu ohleli esitratweni alahlekelwe okanye enze into ephosakeleyo, oku kuphulukana kuhlala kungumfanekiso engqondweni yakhe kwaye lo mfanekiso ugcinwe njengenkumbulo yakudala. Lo mfanekiso uhlala uqondwa okanye ubonakaliswa ngumzimba womnqweno okanye i-spook. Iphendula kumfanekiso ngokuxelela istter ukuba ngelaxesha elinjalo ilahlekile inqaku elinjalo, okanye ukuba eli nqaku lingafunyanwa nguye, kwindawo ebeyibeke kuyo, okanye apho ibilahlekile. Ezi ziimeko apho izibakala zichaziwe kunye neengcebiso ezinikiweyo, ezingqina ukuba zichanekile. Kwelinye icala, apho kunikwe enye iinyani, kuthethwe ubuxoki belikhulu, kwaye ke apho icebiso liba lichanekile kanye, iyaphambuka okanye iyingozi. Sitsho ke ukuba yinkcitho yexesha kwaye kuyonakalisa ukulandela nokulandela icebiso lokuhamba. Kuyinyani eyaziwayo ukuba bonke abantu abaxhaphaza kubuthathaka babanye, ukubheja, okanye ukungcakaza, okanye intelekelelo kwintengiso, bayabavumela abo babandakanyekileyo ukuba baphumelele iimali ezincinci, okanye bayakucekisa ixhoba ngobukrelekrele bakhe. ngentelekelelo. Oku kwenzelwa ukukhuthaza ixhoba ukuba liqhubeke nomngcipheko wakhe, kodwa ekugqibeleni oku kukhokelela ekusileleni kunye nasekonakaleni. Injalo imeko yemalamedi kunye nabazingeli be-spook kunye nabazingeli bezinto ezinje. Iinyani ezincinci abazifumanayo ziyinyani ukuba baqhubeke neenkqubo zabo de, njengomlinganisi, bangene nzulu ukuze baphume. Iipuzzle zithatha ulawulo kwaye ekugqibeleni zinokujonga ixhoba ngokupheleleyo kwaye zilandele ukungaphumeleli kunye nomonakalo. Amanani ophakathi kunye nawokudlula kweziganeko ezizezona ziya kuthi zingqineke ziyinyani ezi ngxelo.